အပြင်ပန်းမာကြောတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် အတွင်းစိတ်အရမ်း နူးညံ့တဲ့ A သွေးလေးတွေအကြောင်း - CeleLove
October 12, 2019 Cele Love ဗေဒင်ကဏ္ဍ 0
A သွေးလေးတွေဟာ သွေးအမျိုးအစားတွေထဲမှာ အလျှို့ဝှက်ဆုံးသွေးအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ် … ။ အပြင်ပန်းမာကြောတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းအတွင်းစိတ်အရမ်း နူးညံ့တဲ့ A သွေးလေးတွေအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် … ။
(၁) အေသွေးလေးတွေဟာ အရမ်းကိုပွင့်လင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် … ။ ဒါကြောင့် မသိတဲ့သူတွေက သူတို့ကို ဒေါသကြီးပြီး အပေါက်ဆိုးတယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ပွင့်လင်းလို့ဖြစ်ပါတယ် … ။
(၂) အေသွေးလေးတွေဟာ လူကြားထဲမှာ ထင်ပေါ်ချင်တဲ့သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး … ။ တစ်ယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေးနေရတာကို သဘောကျတဲ့သူတွေပါ … ။
(၃) အေသွေးလေးတွေဟာ လွတ်လပ်မှုကို အရမ်း တန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် … ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေ၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောဆိုချင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် … ။
(၄) အေသွေးလေးတွေဟာ စိတ်မထင်ရင် မထင်သလိုလုပ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ထားမကောင်းဘူးလို့ အထင်ခံရတတ်ပေမယ့်တကယ်တမ်းကတော့ စိတ်ကောင်းအရမ်းရှိတဲ့သူတွေပါပဲ. .. ။
(၅) အေသွေးလေးတွေဟာ အရမ်းလျှို့ဝှက်ပါတယ်နော် … ။ ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြတတ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး … ။ ဒါကြောင့် တစ်ခါတလေကျရင် သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်ကိုနားလည်ဖို့ ခက်ပါတယ် … ။
(၆) အေသွေးလေးတွေဟာ မသိတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုရင် ခပ်တည်တည်နေတတ်ကြပြီး အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့ သူတွေဖြစ်တာကြောင့် မာနကြီးတယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ် … ။ တကယ်ပေါင်းကြည့်ရင်တော့ ငပေါလေးတွေပါပဲ … ။
(၇) အေသွေးလေးတွေဟာ ပေါက်ကွဲပြီဆိုရင်လည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါက်ကွဲတတ်သလို၊ နားလည်ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့နေရာမှာလည်း နှစ်ယောက်မရှိပါဘူး … ။
(၈) အေသွေးလေးတွေဟာ မှန်လိုဆက်ဆံတတ်တဲ့သူတွေပါ။ ကိုယ့်အပေါ်ကိုမကောင်းရင် ကိုယ်ကလည်း ပြန်မကောင်းသလို၊ ကိုယ့်အပေါ်ကျေးဇူးရှိရင်လည်း ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးနော် … ။
(၉) အေသွေးလေးတွေဟာ အရမ်းစိတ်ဆတ်ပါတယ် … ။ စောင့်ရတာကိုမကြိုက်သလို၊ တစ်နေရာတည်းမှာလည်း အကြာကြီးမနေချင်ပါဘူး … ။ စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ် … ။
(၁၀) အချစ်ရေးမှာတော့ အချစ်ကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့် တစ်ဖက်လူက ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မချစ်သည့်တိုင် ရူးရူးမူးမူးချစ်နေတတ်တဲ့သူလေးတွေပါပဲ … ။
အပွငျပနျးမာကွောတယျလို့ထငျရပမေယျ့ အတှငျးစိတျအရမျး နူးညံ့တဲ့ A သှေးလေးတှအေကွောငျး
A သှေးလေးတှဟော သှေးအမြိုးအစားတှထေဲမှာ အလြှို့ဝှကျဆုံးသှေးအမြိုးအစား ဖွဈပါတယျ … ။ အပွငျပနျးမာကွောတယျလို့ထငျရပမေယျ့ တကယျတမျးအတှငျးစိတျအရမျး နူးညံ့တဲ့ A သှေးလေးတှအေကွောငျးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော … ။
(၁) အသှေေးလေးတှဟော အရမျးကိုပှငျ့လငျးတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ … ။ ဒါကွောငျ့ မသိတဲ့သူတှကေ သူတို့ကို ဒေါသကွီးပွီး အပေါကျဆိုးတယျလို့ ထငျတတျကွပါတယျ။ အမှနျကတော့ ပှငျ့လငျးလို့ဖွဈပါတယျ … ။
(၂) အသှေေးလေးတှဟော လူကွားထဲမှာ ထငျပျေါခငျြတဲ့သူတှေ မဟုတျပါဘူး … ။ တဈယောကျတညျး အေးအေးဆေးဆေးနရေတာကို သဘောကတြဲ့သူတှပေါ … ။
(၃) အသှေေးလေးတှဟော လှတျလပျမှုကို အရမျး တနျဖိုးထားတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ … ။ လှတျလှတျလပျလပျနေ၊ လှတျလှတျလပျလပျပွောဆိုခငျြတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ … ။
(၄) အသှေေးလေးတှဟော စိတျမထငျရငျ မထငျသလိုလုပျတတျတဲ့သူတှဖွေဈတာကွောငျ့ စိတျထားမကောငျးဘူးလို့ အထငျခံရတတျပမေယျ့တကယျတမျးကတော့ စိတျကောငျးအရမျးရှိတဲ့သူတှပေါပဲ. .. ။
(၅) အသှေေးလေးတှဟော အရမျးလြှို့ဝှကျပါတယျနျော … ။ ခံစားခကျြတှကေို ထုတျပွတတျတဲ့သူတှမေဟုတျပါဘူး … ။ ဒါကွောငျ့ တဈခါတလကေရြငျ သူတို့ရဲ့ ခံစားခကျြကိုနားလညျဖို့ ခကျပါတယျ … ။
(၆) အသှေေးလေးတှဟော မသိတဲ့သူတှနေဲ့ဆိုရငျ ခပျတညျတညျနတေတျကွပွီး အေးအေးဆေးဆေးနတေတျတဲ့ သူတှဖွေဈတာကွောငျ့ မာနကွီးတယျလို့ထငျတတျကွပါတယျ … ။ တကယျပေါငျးကွညျ့ရငျတော့ ငပေါလေးတှပေါပဲ … ။
(၇) အသှေေးလေးတှဟော ပေါကျကှဲပွီဆိုရငျလညျး ပွငျးပွငျးထနျထနျပေါကျကှဲတတျသလို၊ နားလညျခှငျ့လှတျတတျတဲ့နရောမှာလညျး နှဈယောကျမရှိပါဘူး … ။
(၈) အသှေေးလေးတှဟော မှနျလိုဆကျဆံတတျတဲ့သူတှပေါ။ ကိုယျ့အပျေါကိုမကောငျးရငျ ကိုယျကလညျး ပွနျမကောငျးသလို၊ ကိုယျ့အပျေါကြေးဇူးရှိရငျလညျး ဘယျတော့မှမမပေ့ါဘူးနျော … ။
(၉) အသှေေးလေးတှဟော အရမျးစိတျဆတျပါတယျ … ။ စောငျ့ရတာကိုမကွိုကျသလို၊ တဈနရောတညျးမှာလညျး အကွာကွီးမနခေငျြပါဘူး … ။ စိတျမွနျလကျမွနျရှိတဲ့သူတှပေဲဖွဈပါတယျ … ။
(၁၀) အခဈြရေးမှာတော့ အခဈြကွီးတဲ့သူတှဖွေဈတာကွောငျ့ တဈဖကျလူက ကိုယျ့ကိုယျပွနျမခဈြသညျ့တိုငျ ရူးရူးမူးမူးခဈြနတေတျတဲ့သူလေးတှပေါပဲ … ။